Aiza ny bokotra manaraka? | Martech Zone
Alakamisy Febroary 21, 2008 Alahady 28 Febroary 2016 Douglas Karr
Ny fampiasana dia siansa, fa ny sasany amin'izany dia voajanahary. Tadidiko fa nifamaly tamin'ny olona momba ny fampiasa aho rehefa niasa ho Product Manager. Misy zavatra sasantsasany omena - toy ny hoe manara-maso ny efijery (ankavia miankavanana), ny fomba fandehanan'izy ireo mankany ambany, ary ny fomba anantenan'izy ireo ny hetsika eo amin'ny farany ambany.
Tsy dia misy siansa firy, ny sasany amin'ireo zavatra ireo dia samy voajanahary, ary ny sasany amin'izy ireo dia mifototra amin'ny fironana teo aloha amin'ny fitetezana an-tserasera.
Anio hariva dia manana sakaizan'ny zanako vavy aho, ka nanapa-kevitra ny hanafatra amin'ny Internet aho ambin 'ny daomy. Zippy ny tranokalan'izy ireo vaovao - toa Java daholo izany. Mahafinaritra ny maso amin'ny sary, ary haingana izy io. Tsara kokoa noho i Pizza Hut na an'i Papa John… ary mandeha izy io, tsy toa an'i Donato.
Re: Donato's: Volana maro taty aoriana ary heveriko fa efa nanandrana am-polony am-polony izay tsy nahafahako nibaiko noho ny faharetany na noho ny fikandrana diso lehibe .NET.
Nahita olana iray manjelanjelatra aho amin'ny fampiasana ny tranokala. Topazo maso ity efijery ity ary alaivo an-tsaina hoe mameno azy ianao:
Aorian'ny famenoanao ny mombamomba anao dia manara-maso ny masonao - ary manantena - handroso amin'ny efijery manaraka amin'ny fipihana eo ankavanana. Tsy maintsy nitady fotoana kelikely aho vao hitako ny bokotra manaraka. Ny bokiko Kupon sy ny saha eo ankavanana no nahazo ny saiko, ka sahirana aho nahita azy.
Ny fanovana tsotra iray dia mety hanamora kokoa ity pejy ity ary, azoko antoka fa hanatsara ny fiovan'ny mpanjifa izany:
Ny famindrana ny bokotra miankavanana fotsiny, izay hanarahan'ny masoko fanantenana azy, dia fanatsarana lehibe eo amin'ny sehatra hafa tsara tarehy. Izaho koa dia hahita loko vaovao, angamba maitso, hanomezana mari-pamantarana mandritra ny fampiharana mandra-pahavitan'ilay olona. Ny toerana tsy tapaka, ny loko ary ny laza dia hanome traikefa tsy misy tohiny izay hitarika ny mpampiasa hamaky ny tranokala.
Fanampiny vaovao ao amin'ny tranokalan'ny Dominos ny Pizza Tracker:
Ny ampahany mampihomehy dia ny fizarana tsirairay manjavona sy mivoaka… ary ny fizarana 5 (fandefasana) no fizarana lehibe indrindra. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mety nanamboatra fisie flash 30 minitra fotsiny i Dominos izay misy elanelana ampy handraisana ny +/- 15 minitra (vinavinako). Lalao ratsy io… nefa mety.
Misy fifandraisana tena izy ao amin'ilay pejy - ny anaran'ilay mpamily fitaterana dia teo mba hanomezana valiny sy fanamarihana avy hatrany. Milay izany!
Tags: maherin'ny mpanjifaDan ZarrellaandraikitraKipp BodnarMaya Grinbergvalandresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazetyamin'ny spamUnsubscribesandan'ny infographicinona no atao hoe infographic
Fiarovana ny Persona amin'ny Internet anao
Febroary 21, 2008 amin'ny 9:13 PM
Tsara, noana aho izao…raha ny Subway ihany no hanatitra.
22 Feb 2008 tamin'ny 11:51 maraina
Tsy manao livraison izy ireo fa ny vitsivitsy amin'izy ireo no manao commande en ligne. Tsy dingana tsara anefa izany! Tsy maintsy nanoratra boky momba ny olan'ny fampiasana azy ireo aho.
Febroary 22, 2008 amin'ny 12:40 PM
Tsy vitan'ny hoe tsy nahita ny bokotra “Manaraka”, rehefa nitady azy aho dia tsy afaka nijanona nisarika ny masoko hankany amin'ilay bokotra “COUPONS ONLINE” lehibe manjelanjelatra. Raha toa ianao ka hikorontana eo amin'ny toerana misy ny bokotra manaraka/rohy, aza mihady lalina kokoa amin'ny fampidirana bokotra mena goavambe any an-kafa eo amin'ny efijery.
Febroary 22, 2008 amin'ny 4:20 PM
Olana goavana io bokotra manaraka io. Efa tany amin'ny tranokala aho taloha izay sarotra be ny mivezivezy (noho ny endrika tsy misy dikany) ka X'd nivoaka aho.
Mar 20, 2008 ao amin'ny 12: PM PM
Raha ny marina dia manana fampahalalana anatiny momba izany aho ary tena misy ny Tracker - fanalahidin'ny rafitra famandrihana anatiny an'i Domino izay ampiasain'izy ireo hanaraha-maso ny fahombiazany. Tena marina +/- 40 segondra.